गणितमाथि फेरि झेल !
गणितमाथि फेरि झेल ! संयोजक भन्छन्ः परिवर्तन नगरे खतरा
दिनेश गौतम काठमाडौं, ७ चैत
आगामी शैक्षिक सत्रबाट लागू हुने कक्षा ११ र १२ को नयाँ पाठ्यक्रममा गणित विषयलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै गणित विज्ञहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
गणितका सरोकारवालाहरूले विरोध जनाएपछि विवाद समाधान गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले समिति पनि बनाएको छ । समितिले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिरहेको छ । गणितको विवाद समाधान नहुँदै फेरि अर्को विवाद सुरू भएको छ ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रअन्तर्गतको गणित विषय समितिले केन्द्रले गणितको पाठ्यक्रम तोडमोड गरेर ल्याइएको आरोप लगाएको छ ।
विषय समिति संयोजकले नै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ल्याएको ११ र १२ को पाठ्यक्रम तोडमोड गरेको ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।
पाठ्यक्रम नसच्याए खतरा निम्तिन्छ
राममान श्रेष्ठ , संयोजक, गणित विषय समिति
विषय समितिले जुन पाठ्यक्रम बनाएको थियो, त्योभन्दा फरक पाठ्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । समितिमा धेरै ड्राफ्ट आएका थिए । आएका ड्राफ्टमाथि शिक्षक र विज्ञहरूसँग छलफल गरेर राय सुझाव लिएर अन्तिम ड्राफ्ट बनाएको हो ।
तर अहिले पाठ्यक्रम आउँदा पुरानै आयो । विषय समितिले गरेको निर्णयभन्दा बाहिरको पाठ्यक्रम कसरी आयो ? परिवर्तन गर्नुपर्ने भए विषय समितिले गर्नुपर्ने हो । कसले परिवर्तन गर्‍यो अचम्मित भएका छौँ । विद्यार्थीले पढ्न सक्ने, पास हुने खालको परीक्षाको प्रश्नपत्रलगायतको ड्राफ्ट समितिले बनाएको थियो ।
तर, पुरानै पाठ्यक्रम ल्याइएको छ । तत्काल सबै पक्षसँग छलफल गरेर समाधान नगर्ने हो भने यसले यसले खतरा निम्ताउँछ । गल्ती सुधार गरिएन भने राम्रो सन्देश जाँदैन ।
काउन्सिलमा परिवर्तन !
जगन्नाथ अधिकारी, गणित अधिकृत, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र
पाठ्यक्रमको ड्राफ्ट बनाउन कार्यदल बनाइएको थियो । त्यो कार्यदलले बनाएको ड्राफ्ट विषय समितिमा छलफल भएको हो ।
समितिले सुझाव संकलन र छलफल गरेर उक्त ड्राफ्ट काउन्सिलमा पाठाएको थियो । काउन्सिलले परिमार्जन गरेर पाठ्यक्रम पास गरेको हुन सक्छ ।
गाणित विवाद समाधान गर्न छलफल जारी
जीवन काफ्ले, सह–सहचिव, गणित समाज
गणितको विवाद समाधान गर्न समिति बनाउनु राम्रो हो । समितिले छलफल पनि गरिरहेको छ ।
कस्तो प्रतिवेदन बनाउन समितिले भन्ने हो । राम्रो प्रतिवेदन बनाएर छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । गणित समाजले समितिलाई गणित किन चाहिन्छ, कहाँकहाँ त्रुटि भएको छ, जानकारी गराएका छौँ ।
गणितबिना नै साइन्स पढ्ने वातावरण बनाइँदै छ । तर विज्ञान विषयमा गणित अनिवार्य हुनुपर्छ । अन्य विधामा गणित रोज्न पाउनुपर्छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत ७, २०७६, ०२:०८:००
गेष्ट लेक्चर पनि अनलाइनमार्फत दिँदै युनिग्लोव कलेज
फोर्ब्समा अटाएका पूर्वेली ‘अर्बान गर्ल’
के हो कोरोना ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ ? किन गरिन्छ ?